Diiwaangelinta - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Raadi Qorshe > Qorshaha Caafimaadka Apple > Diiwaangelinta
Waxaad u qalantaa qorshe adiga ku dhageysta. Isku qor CHPW caymiskaaga Apple Health.
Waxaad ku jirtaa xarunta qoyskaaga, bulshadaada, iyo caafimaadkaaga. Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), waxaad ka heshay qorshe caafimaad oo taageera dhammaan baahiyahaaga.
Sida looqoro CHPW
Si aad iskaga diiwaangeliso Apple Health (Medicaid) kaligaa, booqasho wahealthplanfinder.org ama wac Xaruntooda Taageerada ee 1-855-923-4633, ama waad wici kartaa CHPW waana ku faraxsanaan lahayn inaan ku caawinno.
Ma ubaahantahay caawimo? naga soo wac
Hubso inaad doorato qorshahaaga
Markii laguu oggolaado Apple Health bogga wahealthplanfinder, waxaad markaa leedahay xulasho ururada daryeelka la maareeyey. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad doorato Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington. Haddii aadan hubin sida loo qoro oo loo doorto qorshe, waxaan kaa caawin karnaa tallaabooyinka.
Horeba Apple Health oo aad dooneysaa inaad bedesho qorshahaaga?
Waxaa jira dhowr waddo oo loogu beddelo Apple Health-kaaga CHPW:
Beddel qorshahaaga Washington Healthplanfinder
Booqo Website-ka Xariirka Macaamiil ee ProviderOne.
Codso isbeddel adiga oo u maraya Maamulka Daryeelka Caafimaadka (HCA) khadka tooska ahXullo mowduuca “Qor / Beddel Qorshayaasha Caafimaadka.”
Ka wac HCA halkan 1-800-562-3022 (TRS: 711).
Booqo khabiir isqorista xarunta caafimaadka bulshada ee deegaankaaga si ay kuu caawiso.
Su'aalo? Waxaad naga soo wici kartaa 1-866-907-1904 (TTY Dial: 711), Isniinta ilaa Jimcaha 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo, waxaanan kaa caawin doonaa talaabooyinka aad ku bedelayso qorshahaaga.
Waxaad mudan tahay dhaqaatiir heer sare ah. Xubin ahaan CHPW, waxaad ka dooran kartaa in ka badan 2,500 bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah oo adiga ku dhejiyay xarunta daryeelkaaga. Taasina waa bilowga daryeelkaaga:
Waxbadan ka baro caymiska CHPW ay ka mid yihiin caafimaadka, caafimaadka maskaxda, soo kabashada isticmaalka maandooriyaha, ilkaha, aragga, iyo maqalka.
Hubi haddii dhakhtarkaagu ku jiro shabakadda CHPW adoo raadinaya kuweenna tusaha bixiyaha.
Hubi haddii aan ku daboolno daawadaada raadinta qaabkeena internetka.
Read our su'aalaha ku saabsan qorshaha caafimaadka caawimaad dheeraad ah.
Maxaad u baahan tahay inaad isqorto
Si aad isugu qorto Apple Health, waxaad u baahan doontaa dukumiintiyada soo socda ee qof kasta oo qorsheynaya caymiska, oo ay ku jiraan carruurta:
Aqoonsiga sharciga, sida laysanka darawalnimada, shahaadada dhalashada, ama baasaboor
A-nambar, haddii tani adiga ku khuseyso
Qiyaasta dakhliga qoyska
Cashuur celintaadii ugu dambaysay (oo kaliya loogu talagalay madaxa qoyska)
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: May 12, 2022